7 Habbits for Mental Wealth- ဆီလျော်အောင် ရေးချင်သလိုရေးသည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness »7Habbits for Mental Wealth- ဆီလျော်အောင် ရေးချင်သလိုရေးသည်။
7 Habbits for Mental Wealth- ဆီလျော်အောင် ရေးချင်သလိုရေးသည်။
Posted by ဇီဇီ on Jun 13, 2013 in Health & Fitness, Relationships & Family, Society & Lifestyle | 21 comments
7 Habits for Mental Wealth – Adopt these habits and enjoyafulfilling life
1) A/Prof Daniel Fung
Senior Consultant of Child & Adolescent Psychiatry Department
Project Director of Early Intervention and Assessment in Community Mental Health
2) Jillian Boon
Psychologist of Child & Adolescent Psychiatry Department, Institute of Mental Health
ပုံကို အင်တာနက်မှ ယူသည်။
၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပါ။
အကန့်အသတ် စသည်တို့ ကို သိခြင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်မှတ် တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အဓိက အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်ကို ကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြု ဖို့လိုသလို …..
ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ နိုင်နင်းမယ် ဆိုတာကို လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကွယ်မဝှက် သိဖို့ လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။
တစ်ချို့က လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မယ် စသည်ဖြင့်မတူနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ့်အားသာချက်ရော အားနည်းချက်ရော သိမှသာ ဒီ နှစ်မျိုးကို မျှတအောင် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် လိုအပ်ချက်တွေကို သိရှိထိန်းညှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂) စိတ်ဖိစီးမှု အကြောင်းကို သိနားလည်ပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတာ လိုအင်လောဘတွေ များပြားလာတဲ့ အချိန်မှာ ခန္တာကိုယ်က တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။
စိတ်ရဲ့၊ ကိုယ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုများကို ဖြည့်ဆီးဖို့ ပြင်ဆင်နေစဉ်မှာ ခန္တာကိုယ်ကနေ
တစ်ချို့ ဖိစီးမှုတွေက တစ်ခုသောအဆင့်မှာ
တစ်စုံတစ်ခုကို အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးတယ် စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးမျိုးရှိပါရဲ့။
တစ်ချို့ ရုတ်ချည်းဖိစီးတုံ့ပြန်လှုပ်ရှားမှုမျိုးဟာ ကိုယ့် အသက်ကို ကယ်ဆယ်နိုင်တဲ့ အထိဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခြားတစ်ဘက်က ကြည့်ရင်တော့ စိတ်ရော လူရော ခံနိုင်ရည် အားထက် ကျော်လွန်လာတဲ့ ဖိစီးမှုမျိုးက အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
ဖိစီးမှု ကို ရင်ဆိုင်တဲ့ အခါမှာ အရှိအတိုင်း လက်ခံပြီး တိုက်ထုတ်မလား၊
ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားမလား ဆိုတဲ့ နှစ်နည်းနဲ့ ခန္တာကိုယ်ယန္တရားက တုံပြန်လေ့ရှိတယ်။
ဖိစီးမှုများတဲ့ အချိန်မှာဆို နှလုံးခုန်တာမြန်လာစေတဲ့၊ ကြွက်သားတွေကို လှုံ့ဆော်မှု မြင့်တက်စေတဲ့ အာရုံကို ဖြတ်လတ်လာစေတဲ့ Cortisol, Adrenaline, Noradrenaline စတဲ့ ဓာတ်တွေကို ခန္တာကိုယ်က ပမာဏများများထုတ်လွှတ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရုတ်ချည်း တုံ့ပြန်မှုက အန္တရာယ် အခြေအနေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်စေတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ မှတ်ထားရမှာ တစ်ခုက မိမိတို့ရဲ့ ဖိစီးမှုကို တုံ့ပြန်တဲ့ အနေအထားက…
ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ် ဆိုတာပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အချိန်ကြာလာလေလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နဲ့ အခြား သူတွေကို ပါ အဆင်မပြေအောင် ခံစားရတာမျိုးပါ။
လက်ငင်းအခြေအနေမှာကို ကိုယ့်နဲ့ တစ်ခြားသူတွေရဲ့…
မိသားစုဘဝ စတာမျိုးတွေကိုပါ မကောင်းတဲ့ ဘက်က အကျိုးသက်ရောက်စေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဖိစီးမှု ဆိုတာက လည်း ကိုယ့်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အထက်ပါ နယ်ပယ်မျိုးက လာတတ်တာပါ။
ဘယ်လို ဖိစီးမှု မျိုးလဲ…
ကိုယ့် ဘဝရပ်တည်မှု နဲ့ နေ့စဉ် အခြေအနေတွေကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်လဲ ဆို တာကို သိထား၊ သတိထားမိခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဖြေဖျောက်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဆင်ခြင်နိုင်ပါတယ်။
၃) ကိုယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို သိရှိပါ။
ပန်းတိုင် ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပါ။
ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့် ရည်မှန်းချက်ကလည်း စစ်မှန်ပြီး လက်တွေ့ကျတာမျိုးဖြစ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။။
ကိုယ့် လုပ်နိုင်ချေထက်ကျော်လွန်ပြီး ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ထားခြင်းကို ရှောင်ရှားရမှာပါ။
အဲလို ပန်းတိုင် အရှည်ကြီး လျှောက်လှမ်းရမဲ့ ပန်းတိုင်ကြီး ချမှတ်မဲ့ အစား ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေ့ကို နားလည်ပြီး အဲဒီ အပေါ်မှာ အရင် အာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဘဝလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အောင်မြင်တဲ့ ပန်းတိုင်ငယ်လေးတွေ စိုက်ထူနိုင်မှာ မလွဲနိုင်ပါဘူး။ ဒီ ပန်းတိုင်ငယ်လေးတွေက ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကြီးကို ရောက်ဖို့ အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
၄) ကိုယ့်က ဘာကို ဦးစားပေးသင့်လည်း သိမြင်ပါ။
တာဝန်ယူမှု နဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ အများကြီးကို တချိန်တည်းမှာ ယူဖို့ ကြိုးစားတာဟာ…..
တစ်ကြိမ်မှာ တာဝန်ကြီးတစ်ခု ယူရတာထက် လူကို ဖိစီးမှုဖြစ်စေတာ လူတိုင်း အသိပါ။
ဒီတော့ ကိုယ့် အချိန်ကို ကိုယ့်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ၊ မျှော်လင့်သလောက် ပမာဏ အတိုင်းပဲ ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲပါ၊။
ဒီလို အချိန်ကို နိုင်နင်းအောင် စီမံမယ် ဆိုတဲ့ အကျင့်က လုပ်နိုင်ခြေ ကျော်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လက်လွှတ်နိုင်အောင် အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒီ နည်းနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ အင်အားနဲ့ စွမ်းရည်ကို
လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ပေါ်မှာ အာရုံထားပြီး အပြည့်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅) ကိုယ့်ရဲ့ အထောက်အပံ့က ဘာဖြစ်နိုင်လည်း ဆိုတာ သိနိုင်ပါစေ။
“ကိုယ့်ရဲ့ ဖိစီးမှုပြသနာကို ဝေမျှခြင်းဟာ ထို ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်စေတယ်” ဆိုတာ မရိုးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဟောင်းတစ်ခုပါ။
ကိုယ်တိုင်က ဘယ်သူ့ကို ယုံကြည်နိုင်တယ်၊
ဘယ်သူနဲ့ဆို စိတ်သက်သာရာရစေတယ် ဆိုတာ သိခြင်း ဟာလည်း ဖိစီးမှုကို လျှော့ချဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အသိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့ အခြေအနေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို ယုံကြည်ရတဲ့သူကို ပြောပြဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ ဒီလို ပြောဆိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့် အမြင်နဲ့ မတူတဲ့ အခြားအမြင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ပြဿနာတစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဖိစီးမှုကလည်း အနည်းနဲ့ အများ လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆) မျှခြေကို သိပါ။ (မျှတမှုရှိပါစေ)
နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် ကစားချိန်ကစား၊ နားချိန်နား ဆိုတာမျိုးကို သိဖို့ပါ။ ဒီ အသိက ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဖိစီးမှုနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်သွားနိုင်နိုင်ပါတယ်။
အကူအညီလိုရင် တောင်းဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ ဒါမှသာ အလုပ် ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးကို မျှတစွာ တာဝန်ခွဲယူနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် မှာရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု အဆင့်မြင့်တက်နေတာကို လည်းသိပြီး ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကို သိနိုင်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပါ။
ကိုယ့်မလျှော့ချနိုင်တဲ့ တစ်ချို့သော ဖိစီးမှု၊ ပူပန်မှုတွေကိုတော့ စိတ်ပညာရှင်တို့ လူမှု အကြံပေး အရာရှိ စသည်တို့ရဲ့ အကူအညီယူသင့်ပါတယ်။
၇) ဘယ်လို အနားယူရမယ် ဆိုတာ သိပါစေ။
ရုံး အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် နေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေက ကိုယ့် စိတ်ထဲ အတွေးထဲ အမြဲ စွဲပြီး စိုးမိုးနေတတ်တာမျိုးပါ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာဆို ကိုယ်စိတ်ပျော်ရွှင်ရာလေးကို အချိန်ယူပြီး လုပ်သင့်နေပါသေးတယ်။
မိသားစု/သူငယ်ချင်း/မိတ်ဆွေ စိတ်တူကိုယ်တူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းနိုင်တယ်။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အားကစားတစ်မျိုးမျိုး လေ့လာ လိုက်စားနိုင်တယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့နိုင်မဲ့ ရောဂ၊ တရားထိုင်၊ ရှုရှိုက်လေ့ကျင့်ခန်း စသည်တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။အဲဒါမျိုး လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ ပုံမှန် ပြုလုပ်သွားနိုင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေပြီး စိတ်အာရုံ ခံစားမှုမှာလည်း ရှင်းလင်းတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ပူပန်မှု၊ ဖိစီးမှု ရှိလာတဲ့ အချိန်မှာတောင် ခေါင်းအေးအေးနဲ့ စိတ်ကို စုစည်း အာရုံစိုက်နိုင်မှာပါ။
ခုက စပြီး ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ခြားနားမှုကို သင် သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်တယ် လို့ အတင်းကို ယူဆပြီး ပြောထားတာရယ်။
ဖြစ်ပုံက ဒီ က စ တာ။
အသက်လေးများ ၃၀ ကျော်လာခါစက လူက အသက်ကြီးပြီ ဆိုတာ လက်မခံချင်သလိုလို၊….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်မစီးဘူး ဆိုတာ လက်မခံချင်သလိုလိုဖြစ်လာတယ်။
(ကိုယ် အလေးချိန်ကို ပြောတာဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတော့ တိုးတက်တယ်ရယ်)
အဲဒါနဲ့ စိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာလေး၊ အသက်အလိုက် အပြောင်းအလဲ နဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေကို လိုက်ရှာဖတ်ရင်းနဲ့
Mid-Life Crises ဆိုတဲ့ အကြောင်းသွားဖတ်မိတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါက အသက် ၄၀ ကျော် ၅၀ နောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်တတ်တာပေါ့လေ။
ဖတ်မိပြီးမှတော့ ဘာသာပြန်ပြီး ရေးချင်တာရယ်။
ကို အမတ်မင်းနဲ့ ပြောမိတော့ ရွာထဲမှာ တစ်ယောက် ရေးဖူးသတဲ့။ အဲဒါနဲ့ လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။
ကို ဖက်ကက်နဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်ကျတော့ ၃၀ ကျော်တွေ အတွက် ရေးပါလားတဲ့ ။ ကိုယ်တွေ အသက်အရွယ်ပေါ့လေ။
အဲဒါနဲ့ လိုက်ရှာရင်း ကံကောင်းချင်တော့ ဟို တစ်နေ့က ဆေးရုံ ကို ကိစ္စရှိလို့ သွားရာက ဆေးရုံက စောင့်တဲ့ နေရာမှာ ဖတ်ဖို့ ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်မိလိုက်တာ။
အဲဒီမှာ ဒီ ၇ ချက်ကို သွားတွေ့လို့ စာအုပ်ကို ခိုးလာ (အဲလေ၊ ဟုတ်ပေါင်) ယူလာပြီး ဘာသာပြန်တာပါ။
ဘာသာပြန် ပြီးရုံနဲ့လည်း ဘယ်တုန်းကမှ ရပ်လို့ မရ။ ကိုယ့်အာဘော်ကို ရေးချင်သေးတာရယ်။ သည်းခံကြပါ ပိတ်သတ်ကြီး။
တကယ်တော့ အသက်အပိုင်းအခြားတွေထဲမှာ ကျနော်တို့ အသက်အပိုင်းအခြား ဟာ ရင်ဆိုင်ဖို့ အခက်ခဲဆုံးပါ။
(သနား စရာ ပဲ၊ ငိငိ)
၃၀ အောက်ဟာ မိဘလုပ်စာကို မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ စားနေလို့ ရပါသေးတယ်။
၄၀ ကျော်တွေဟာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူကြီး၊ ဦးစီး အဖြစ်နဲ့ လိပ်ပြာသန့်သန့် နေလို့ရပါသေးတယ်။
ကျနော်တို့ အသက်အရွယ်ဟာဖြင့် အသက်ကြီးတယ် အပြောခံရမဟာလည်း စိတ္တဇဖြစ်၊ အမှန်အတိုင်းဆိုလည်း အသက်က မငယ်တော့။
၁) စီးပွါးရေး (ငွေရေးကြေးရေး)
၂) အိမ်ထောင်ရေး (လင်ရေး၊ မယားရေး)
၃) လူမှုရေး (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး)
၅) သားသမီး ဝတ္တရား
စတာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရင်ဆိုင် အကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့ အရွယ်ပါ။ ကိုယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ့်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ လမ်းကို တရားဝင် ရွေးချယ်ရတဲ့ အချိန်အခါဖြစ်သွားပါပြီ။
ကံမကောင်းရင် အားလုံးက တစ်ပြိုက်နက်လာပါတယ်။ ဂစ်ဂစ်။။
ပိုက်ဆံ အဆင်မပြေဆုံး၊ မိသားစုနဲ့ အဆင်မပြေဆုံး၊ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ရဆုံး ကာလတွေပါ။ ငါ တကော ကော တဲ့ အသက်အပိုင်း အခြား ဆိုတော့လေ။
ဒီ အချိန်မှာ ကိုယ့် အတိုင်း အဆ ကိုယ်မသိ တိုးတက်ချင်ဇော၊ အစွမ်းပြချင်ဇော တွေ အားကြီး၊ အရာ အားလုံး ကို လောဘတကြီး ရချင်၊ သင်ယူချင်၊ လေ့လာချင်၊ တတ်ကျွမ်းချင်နဲ့ပါ။
အဲဒီ စိတ်တွေနဲ့ အတူတူ မဖိတ်ခေါ်ပဲ ဖိစီးမှု မျိုးစုံဟာ ရောက်လာတော့တာပါပဲ။
ဟိုး အထက်ပါ ရေးသားချက်တွေအရ၊ ဘဝရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတိုင်းနောက်မှာ ပါလာမဲ့ လူဖိစီးမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု ကို ဘယ်လို တုံ့ပြန်မယ် ဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အခက်ခဲဆုံး အခြေအနေတွေကို ဖြတ်ကျော်ရမှာပေါ့လေ။
” Fight or Flight “ တဲ့။ (ဒီ အကြောင်းတော့ ဆြာ ဂီ နဲ့ ဆွေးနွေးဖူးရဲ့)
စိန်ခေါ်မှု၊ ဖိစီးမှု တွေ ဆီက ရှောင်ပြေးမယ် ဆိုပါစို့။ ဘယ်လောက် ပြေးနိုင်မလဲ။ ကိုယ် ဘယ်လောက် ထိ ဘဝမှာ ရောင့်ရဲ ခြိုးခြံနိုင်မလဲ ဆိုတာပေါ်မူတည်မယ် ထင်ပါတယ်။
ရင်ဆိုင်မယ် ဆိုရင် ရော ဒီ ဖိစီးမှု မျိုးစုံကို ဘယ်လောက်ထိ ထိန်းချုပ်ဖြေဖျောက်နိုင်မလဲ။ (ဒီ ၇ ချက်က ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ပြောပြထားတာပါ။)
ကြားဖူးတာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်။
“Don’t bite more than you can chew” တဲ့။ ဝါးနိုင်တာထက် ပို မကိုက်နဲ့ ပေါ့လေ။
ကိုယ့် လစ်မစ် ကို သိပါ ဆိုတာ ဒါမျိုးပါ။ မနိုင်ဝန်ထမ်းချင်ရင်တော့ ကိုယ့် ခံနိုင်ရည်ထက်ပိုတဲ့ ဝန် ပိမှာပေါ့။
အဲ့ဒါကို ခံနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းရတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ခန္တာအင်အားကတော့ နတ်ရေကန်ထဲ ကျသလို ကြီးမားမလာပဲ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ ပဲ ခန္တာကိုယ် က တုံ့ပြန်တာကိုပြောတာပါ။
အဲဒီတော့ ကိုယ်နိုင်အောင်လုပ်ရမှာက ၂ မျိုးဖြစ်သွားပြီ။
ထမ်းထားတဲ့ မနိုင်ဝန်တွေကိုလည်း ရှင်းရမယ်။
မထိန်းနိုင်တဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သာမက အခြား လူတွေကိုပါ အမြင်မကြည်တာမျိုး၊ ဒေါသထွက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်တဲ့ အပြင် တစ်ချို့လူများကြတော့လည်း စိတ်ဓာတ်ကျ၊
စိတ်ဆိုတာကျလွန်းအားကြီးရင် စိတ်ကျ၊ စိတ်ကြွ မျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ (စိတ်ကျစိတ်ကြွ အကြောင်းကို ပြီးမှ သီးသန့်ရေးပါဦးမယ်။)
သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် တွေ အတွက် ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမှ မကောင်းနိုင်တော့ဘူးကိုး။ ဒါတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကို သက်ရောက်တဲ့ အကျိုးတွေကို ပြောတာပါ။
ဖိစီးမှု ဆိုတာက ရင်ဆိုင်တတ်ရင်၊ ထိန်းညှိတတ်ရင် တကယ် အရည်အချင်းတက်ပါတယ်။
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း ရူးမလောက် ဖိစီးမှုမျိုး ဘဝမှာ ကြုံဖူးပါတယ်။ သိတဲ့ သူတွေ သိကြပါတယ်။
မသိတဲ့ သူတွေက တော့ ပျော်ပျော်နေတတ်လို့ စိတ်ညစ်စရာကို မရှိဘူး ထင်ကြတာကလား။
အဆင့်အမြင့်ဆုံးရင်ဆိုင်ခြင်းက တော့ ဝိပဿနာနဲ့ လို့ ပြောကြပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူများကို ဘယ်လို လုပ်လို့တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။
အနည်းဆုံး အတွေးတွေ၊ မွန်းကြပ်မှုတွေ များလာတဲ့ အခါမှာ အသက်ကို မှန်မှန်ရှုပြီးမှ ကိုယ့် စိတ်ကို ထိန်းနိုင်တာမျိုးပဲ ရှိပါရဲ့။
နောက်ပြီး ဘာလို့ ဒီ လို စိတ်ဖြစ်နေရသလည်း အကြောင်းအရင်း ကို ရှာ၊
ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမလည်း နည်းလမ်းကို ပြန်စဉ်းစားလေ့ရှိတတ်တာမျိုးမို့
ဒီ ၇ ချက်က ကိုယ်တွေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်တာများသမို့ ရှယ်လိုက်ရခြင်းပါ။
မှားတာရှိရင် ပြင်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုဝေဖန်သူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အသက်ကို ဝအောင်ရှူသွင်းပြီး ၊ တစ်အောင့်နေမှ ပြန်ထုတ်လိုက်ရင်
နေသာထိုင်သာရှိလာတာ ကိုယ်တွေ့ ပါပဲဗျာ
မနေ့က ပေပေ့ ကော်မန့်က နောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာပဲ။
ဘာလို့ ဒီ ပို့(စ) က ဒီ နေ့ပြန်တက်လာတုန်းမသိ။
ကုန်ရှာဘီပေါ့ မမဂျီးရယ်…. မီး ညက်နှာပြောင်လို့ ရတော့ဘူးပေါ့နော်
ဟင်.. မနေ့က မန့်ထားတာလေးဒွေ ပျောက်ကုန်ဘီ…
မနေ့က ညက်နာပြောင်ထားတာလေးတွေ ကုန်ပါပြီ ဗုံလေးနဲ့ ဝါးလေးရယ်။
အချက် ( ၇ )ချက်လုံးက..တကယ် သိသင့် သိထိုက်ပြီး..
တလေးတစား..ဖတ်မှတ် …ကျင့်ယူရမှာတွေမို့ ..
ပြေးဝင်လာတဲ့ အတွေးကို ပြောပြတာနော်
ကလေးလိုလဲ ချွဲလို့ မရ
သုံးဆယ်ကျော် အရွယ်မှာ တွေ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေ လို့ ဂျီးဒေါ် ပြောထားတဲ့
အိုက်ဒါ အကုန်လုံးကို သုံးဆယ်ကျော်နဲ့ ကျေပွန်ဖို့တော့ အတော် ခက်မယ့် အမျိုးရယ်
အပေါ်က ပို့စ်ထဲက နည်းလမ်းတွေလဲ လုပ်
သိကြားမင်းရဲ့ အကျန် ပေးချက်ကလေးကိုလဲ လုပ်ပေါ့
ပထမ အချက်ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေး ကို
အရမ်း ဖိဖိစီးစီး လုပ်ပါနဲ့
(အိမ်ကို ချွဲနိုင်တဲ့အချိန်လေး မလွန်ခင်မို့)
အိုက်ဒါကိုလဲ မတွေးနဲ့၊ မလုပ်နဲ့ လို့တော့ ပေါလိုပါဝူး
(အိုက်ဒီအချိန်မှ မရှာရင် အပိုရီး ဖြစ်ဖို့ ငါးဆယ်ရာနှုန်း သေချာသမို့)
သဟာကြောင့်မို့ အိုက်ဒီ အိမ်ထောင်ရေးကို အသေအချာ ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ရှာပါ
အကောင်းဆုံးကတော့ နှစ်ဆယ့် ခွန်လောက်ဆို ရှာသင့်ပီထင်သဗျ (ပြောချင်တာက ဟိုင်းနေပီလို့ )
ရှာပီးရင် အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားပါ (ရကတည်းက)
ဒါဆို အိုက်ဒါလဲ ဖြေရှင်းပီးပီ
တစ်သက်လုံး ဆက်ဆံသွားရမယ့်အရာကွယ့် (ဆရာကြီးလေသံဖြင့် ပြောခြင်း)
သဟာကြောင့်မို့ အခုလို ငယ်တုန်းရွယ်တုန်း သူများတွေ အကောင်းမြင်တုန်းမှာ အမှတ်ရအောင် အပေါင်းအသင်း ဆန့်အောင် လုပ်ထား
လူအမြင်ကတ်တာတွေ သိပ် မလုပ်နဲ့
(အခုထိ ပြောနေတာတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ အရာတွေနော့)
လူမှုရေး ပြီးပြန်တော့ ဘာသာရေး/ သာသနာရေး
လောလောဆယ် ငယ်တုန်း ရွယ်တုန်း ပျော်တုန်း ပါးတုန်းမို့ တတ်နိုင်သလောက်သာလုပ်
စကားပုံတောင်ရှိသေးသလေ တတိယအရွယ် တရားရှာ…တဲ့
(ဖတ်မိသူများ ဆဲကြစေသဒီး )
နောက်ဆုံးအချက် သားသမီး ဝတ္တရား
ငယ်သေးသမို့ သုံးဆယ့် ငါးလောက်အထိတော့ ချွဲလိုက်ပါဦးကွယ်
နည်းနည်း လုပ်ပေး များများ ပြန်ယူပေါ့ ဟီဟိ
အိုက်ဒါကတော့ သိကြား အကျန်ပေးချက်ပါပဲကွယ်
ပြောရတာ မောသွားပြီ နတ်သမီးတွေနဲ့ အနားယူလိုက်ဦးမကွယ်
ဆုံးမ စကားတွေကို မသိချင်ယောင် ဆောင်နေပါတယ် ဆို ဇွတ်ပဲ။
ဂါးးးး ခွက်ဒစ်တူ ဂျီးဒေါ် ..
ကျုပ် မန့်ထားဒါ ဘယ်ပျောက်တွားဒုံးး
ပြန်မန့်ပေး .. ဒါဘဲ ..
အရင် ပို့ (စ) က ပျက်သွားတာလေ။
များများမပြောဂျင်ဗူး… အဲဒီအထဲမှာ ဆိတ်ဖိစီးတာ အဆိုးဆုံးဗဲ.. ဘယ့်နှယ်ဗျာ သက်ရှိသတ္တဝါခြင်း ကိုယ်ဂျင်းမစာ.. အတင်းဖိစီးရသလား… ဝန်နဲ့အား မျှပါစေ…။
ပုံ – ဦးကြောင်ကြီး
လွှတ်တော် တိရစ္ဆာန်ကော်မတီ ဥက္ကဌ
ဆိတ်ပိန်မှ ကြောင်လောက် ရှိတာဆိုတော့ ကြောက်မယ်ဆိုလည်း ကြောက်စရာပဲပေါ့။
ခုတော့ ညီမကအရမ်းကလေးဆန်တွားဘီ တတ်နိုင်တော့ဘူး ရေးပီးစလစ်
​ကျော်​၀င်းက ၂၁ရာစု သား​ရွှေဥ ဆိုပြီး ဘာသာပြန်​ပြီးပါ​ရောလားကွယ်​ ။ ၂၀၁၀ မှာ ဒုတိယ အကြိမ်​ကြန်​ထုတ်​ထားတယ်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ ဖတ်​ဖူးပါတယ်​​အောက်​​မေ့​နေ​ဒါ ။
သများက တက်ကျမ်းတို့ ဆုံးမစာတို့ ဖတ်ခဲတယ်။
ကိုယ့်လောက် ဘယ်သူမှ တတ်တယ်မထင်၊ ကိုယ့်ကို ဘယ်သူမှ ဆုံးမနိုင်တယ်မထင်လို့။
အားဂျီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ အချိန် တွေ့ပြီး ဖတ်မိတာ ဘာသာပြန်တာ။
အိုး လူမိုက်​ဂျီး sorry ​နော့ ​ရှေ့က7habits ဆို​တော့ နာမယ်​ချင်းဆင်​တာနဲ့ ​ရောကြိတ်​လိုက်​တာ ဆရာ ​ကျော်​၀င်း ဘာသာပြန်​တဲ့စာအုပ်​က
7 Habits Of Highly Effecitive Teen by Sean Covey ဖြစ်​ပါတယ်​ ။ ၀ူး ​မောထှာ စာလုံး​ပေါင်းက မှားမှာ​ကြောက်​ရ​သေး
ခုတစ်လော ရုံးမှာ ပရောဂျက်အသစ်စခါစဆိုတော့ စိတ်ဖိစီးတာတွေ အရမ်းများနေတာ ကျွိကျွိစာလေး ပြန်ဖတ်လိုက်တော့ နေနည်းထိုင်နည်း နဲနဲ သိသွားဘီ
ပျက်သွားတဲ့ ပို့(စ) က ကော်မန့်တွေ ပေါင်းထားလိုက်ပြီ။
ကျွန်တော့တောင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ပိုစ့်ရေးပေးသော သူငယ်ချင်းခိုင်ဇာကြီးကို ကျေးဇူးအထူးပါ…
ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာထက်… ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီး Renew ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
(၃၀ အောက်ဟာ မိဘလုပ်စာကို မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ စားနေလို့ ရပါသေးတယ်။) ပြောင်အုံးမှာ.. ပြောင်အုံးမှာ… အမေက ပြောလာလို့ရင် မမဂျီးပြောပြလို့.. မီးကလိုက်နာတာပါလို့ ပြောမှာ..
ပြီးတော့ မိဗုံစိတ်ဖိစီးမှု များလာရင် ခြုံထားတဲ့စောင်တောင် အလွတ်မပေးဘူး အကုန်ကန်ပစ်တာ..
အကျိုးရှိစေလို့ မမဂျီးကို ကျေးဇူးအာဘွား ပါရှင့်….
ဒါလေးဖတ်မိတော့ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ – ၃၀-၄၀ ကာလများကို ပြန်သတိရမိတယ်..။
(အဲဒီတုန်းက ဒီပိုစ့်မျိုးမဖတ်မိရတာ နာတာပဲ)
တကယ်ကိုပဲ ကိုယ်မနိုင်တဲ့ဝန်ထုပ်တွေကို လောဘတကြီးသယ်ပိုးရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့တာ…
မနိုင်ဘူး ဆိုမှတော့ လွတ်ကျတဲ့ဟာလဲ လွတ်ကျ
တမင် လွှတ်ချ ရတဲ့ဟာလဲ လွှတ်ချ ခဲ့ရတာပေါ့….
အကျိုးဆက်ကတော့ အသက် ၄၄-၄၅ လောက်မှာ ဘဘ လို့ စ အခေါ်ခံရတော့တာပဲ
“Don’t eat too much beans more than your buttocks can bare”
ကျုပ်ကတော့ ၃၅နှစ်အရောက်မှာ ဘုရင့်နောင်လို ဖေါင်ဖျက်ပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို နိုင်မှန်း ရှုံးမှန်းတောင် သေချာမဝေခွဲတတ်.. :hee:
ခုလို အကျိုးရှိမဲ့ စာတွေလည်းတော်တော်ဖတ်ဖြစ်ပါရဲ့….
အားပေးသွားပါသီ ဒေါ်ဇဂါး လွတ်…အဟွတ် ဟွတ်(နဲနဲတံတွေးသီးသွားလို့.. )
ဆွိရဲ့ စာလေးဖတ်လိုက်ရတာ… လုံးလုံးရူးသွား… အဲလေ… ဟီး.. စိတ်အားတွေပြန်တက်လာပါဒယ်လို့… :harr:
ရေးဖော် ညီမကြီးဒေါ်ရွှေဆွိရဲ့ ဖတ်ညွန်းကြီးကိုဖတ်ကြည့်မှ…
အနှီ မောင်မောင်ကျောက်စ်မှာ STRESS တွေ အတော်များနေတာ သိလိုက်ရပါ့…
“လာမည့်ဘေး ပြေးတွေ့” ဟုတ်ပေါင်…
လင်လင်ဆော .. လောလောဆယ်တော့
အကြမ်းဖျင်း ဖတ်တွားဘာအိ …
နောက်မှ သေချာဖတ်ဘာ့မီ .. ကွီကွိ ..
စိတ်ညစ်လို့ အယက်ကိုသောက်ဒလယ်……….. (အဲလေ) အကျင့်ပါနေလို့…ခိခိ
သများတော့ အိုက် (၇)ချက်လုံး ကောင်းကောင်းသိတယ်မှတ်တာဘဲ
၁..၂ ..၃..၄.. ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်….ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံကတော့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်အတွက်ပေါ့
နံပတ် (၅) အရဆိုရင် သများရဲ့ အထောက်အပံ့ကောင်းတေက တီးရှော့မင်ဘာတေ ထိပ်ဆုံးကပါတယ်ကွီ (ဒဂယ်ပြောတာ)
နံပတ် (၆) နဲ့ (၇) လိုမျိုး မျှခြေကိုသိတာတို့ ဘယ်လိုအနားယူရမလဲ ဆိုတာမျိုးတွေကျ အသိလွန်နေလို့
မနဲ ဘရိတ်အုပ်ရတယ်…ေိေိ
အော် ငါ့ခမျာ သနားစရာ… ကျောင်းပြီးကထဲက အတိအကျပြောရရင် အသက်(၂၀) မှာ ကိုယ့်ဖာသာ ရှာစားနေရဘီလေ… ဆိုပြီး..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ရတာအမော
(အိမ်ကို ပုန်ကန်ပြီးထွက်လာတာကိုး.. ဂလောက်တော့ချိမာပေါ့) :harr:
” ဘဝမှာ တုံးလုံးလာ တုံးလုံးပြန်ရတာမို့ ကြားမှာ
စားရ၊ ဝတ်ရ၊ နေရ၊ ယူရ သမျှကို အမြတ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ် ”
ဟဲ့ ၊ စားရ ၊ ဝတ်ရ ၊ နေရ ကို နားလည်ပါတယ် ။
” ယူရ သမျှကို အမြတ် ” ဆိုတာ ဘာဒုန်း ။
ဖိုးပေ တို့ လို
အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူအတွက်ကတော့
ဘယ်လောက် အခက်အခဲ ဘေးဒုက္ခကြုံကြုံ
“ဖြစ်သမျှ အကြောင်း အကောင်းချည်းပဲ” ဟု နှလုံးသွင်းတတ်အောင်
အသက် ၃၀ မှာ စတင်ထားရင် အသက် ၅၀ မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေမယ့် အရာများ
အသက် ၅၀ အရွယ်လူတွေကို ငယ်ငယ်တုန်းက ဘာလုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိသလဲမေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အဖြေတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပြီး ရိုးရှင်းလှပါတယ်။ ကိုယ့်အသကိ ၃၀ တနိးကိုရောက်ပြီဆိုရင် ဒီအလုပ်တွေကို လုပ်သင့်ပါပြီ။
၁. ဆေးလိပ်မသောက်နဲ့။ သောက်မိပြီဆိုရင် ဖြတ်ပစ်ပါ။
၂. အမြန်စာတွေကို မစားပါနဲ့တော့။
၃. မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပါစေ။
၄. နေရောင်ကာဆေးမပါဘဲ နေပူထဲ မထွက်ပါနဲ့တော့။
၆. ပိုကိဆံ စစုပါ။ ဘယ်လောက်နည်းနည်း စုဖြစ်အောင်စုပါ။
၇. ကိုယ့်မှာရှိတာနဲ့ ရောင့်ရဲတတ်ပါစေ။
၈. ဘ၀ရဲ့ပန်းတိုင်တွေကို မျက်ချေပြတ်မခံဘဲ ဆက်ကြိုးစားပါ။
၉. အချိန်မှန် အိပ်ရာဝင်၊ အိပ်ရာထပါ။
၁၀. သွားတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။
၁၁. အရာဝထ္ထုတွေကို စုဆောင်းတာထက် အမှတ်ရစရာလေးတွေကို စုဆောင်းပါ။
၁၂. တစ်ခုခုကို ပြန်ပေးလှူတတ်ပါစေ။
၁၃. မျက်စိရှင်ရှင်ထားပြီး လောကကြီးထဲက အသစ်အဆန်းတွေကို နေ့တိုင်းရှာဖွေပါ။
၁၄. တစ်နှစ်ကို စာအုပ် ၁၀ အုပိထကိမနည်းဖတ်ပါ။
၁၅. တတ်နိုင်သမျှ ခရီးသွားပါ။
၁၇. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူတတ်ပါစေ။
၁၈. မှတ်တမ်းတစ်စောင် အမြဲရေးပါ။
၁၉. အိမ်ပိုင်ဆိုင်ိနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၂၀. သူငယ်ချင်းတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။
နှစ် ၅၀၊ နှစ် ၁၀၀ အထိ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ကို သူငယ်ချင်းအားလုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
ref..The Idealist,April 23rd,2015